‘माई लभ’ हेर्नेलाई जापान जाने सुवर्ण अवसर – Nepal Journal
‘माई लभ’ हेर्नेलाई जापान जाने सुवर्ण अवसर
Posted By: Nepal Journal December 10, 2017 | २४ मंसिर २०७४, आईतवार १६:५०
हलमा कुनै पनि नयाँ फिल्म नभएका बेला २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘माई लभ’ टीम यतिबेला देशव्यापी रुपमा फिल्म प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेको छ । फिल्मको टीम अहिले प्रचारको शिलशिलामा पोखरा पुगेको छ ।
२०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पको कथामा निर्माण भएको फिल्म ‘माई लभ’ को टीमले आफ्नो फिल्म प्रचारलाई तीव्रता दिनका लागि एउटा सुनौलो उपहारको घोषणा पनि गरेको छ ।
फिल्म हेर्ने दर्शकमध्ये एकजनाले जापान जाने अवसर पाउने भएका छन् । फिल्म हेरेको टिकट र हलको नाम ‘माई लभ’ को फेसबुक पेजमा पठाउने दर्शकमध्ये एक जनालाई जापान जाने अवसर दिइने निर्माणपक्षले बताएको छ ।
एक जना भाग्यशाली दर्शकले आगामी अप्रिल २५ तारिखमा जापानमा हुन लागेको ‘माई लभ’ को प्रिमियरमा सहभागी हुने मौका पाउनेछन् ।
फिल्म प्रचारका लागि पोखरा पुगेका फिल्मका कलाकारले फिल्म शक्तिशाली बनेको दाबी गरे । यो सामान्य चलचित्र मात्र नभएर आगामी पुस्ताका लागि दस्तावेज समेत भएको उनीहरुले बताएका छन् । चलचित्रका कलाकार तथा निर्माता गणेश लामा आफू चलचित्रप्रति आशावादी देखिएको बताउँछन् ।
फिल्मलाई तोसिआकी इतोहले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा गणेश लामा, शितल श्रेष्ठ, रिवन मित्सुतानी लगायतका कलाकारहरुले मुख्य भुमिका रहेको छ । भुकम्पपछि जापानले देखाएको सहानुभुती र सहयोगको कथा फिल्मले पेश गरेको छ ।
उत्तर कोरियाली आकाशमा अमेरिकी बमवर्षक विमान
By नेपाल जर्नल / September 24, 2017 /0Comments
एजेन्सी । अमेरिकी बमवर्षक र युद्ध विमानहरुले उत्तर कोरियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । अमेरिकी युद्ध विमान या बमवर्षक विमान उत्तर कोरियाको त्यति नजिक पुगेको यो पहिलो पटक हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा बैठकमा कोरियाका विदेशमन्त्री रि...
By नेपाल जर्नल / September 18, 2017 /0Comments
काठमाडौं । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा दुई नं. प्रदेशमा मतदाता रहेका विभिन्न दलका नेताहरुले पनि आ–आफ्ना मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिका दुईस्थित जुद्ध मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी...
By नेपाल जर्नल / July 29, 2017 /0Comments
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनीधिसभा चुनावको लागि दल दर्ता गर्न आव्हान गरेको छ । आयोगले आज सूचना जारी गर्दै ३० दिन भित्रमा दल दर्ता गर्न भनेको हो । आयोगका अनुसार राजनैतिक दलहरुले आउँँदो भदौ ११ गते भित्र दल...
चुडामणिको पक्षमा किन उभिए रामशरण ?
By नेपाल जर्नल / June 27, 2017 / 1 Comment
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसको नेता डा.रामशरण महतले कर छुट दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगद्वारा पक्राउ परेका आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई हचुवाको भरमा पक्राउ गरेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंको बागबजारस्थित होटेल हार्दिकमा आर्थिक पत्रकार मञ्च–नेपालले आयोजना...
आफैंले बोकेको बम पड्किँदा विप्लवका एक कार्यकर्ताको मृत्यु
By नेपाल जर्नल / June 27, 2017 /0Comments
कैलाली । आफैंले बोकेको बम पडकेर धनगढीमा गएराति नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका चार खानेपानी रोडमा बम राख्ने क्रममा बम पडकेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताकाे मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा...
दाेस्राे विश्व युद्धमा याैनदासी राखेकाे मुद्धा पुनः बिउताउँदैछ काेरिया
By नेपाल जर्नल / June 15, 2017 / 169 Comments
सोल, ३१ जेठ । दक्षिण कोरियाको सत्तारुढ दलले जापानले दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा राखेको भनिएको यौनदासीका सम्बन्धमा नयाँ सम्झौताको माग गरेको छ । कोरियाले सो सम्बन्धमा बुधबार नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्दै सो माग गरेको बताइएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा जापानी...
By नेपाल जर्नल / June 15, 2017 /0Comments
काठमाडौं । नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ । अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज' नामको सफ्टवेयर प्रणाली...
By नेपाल जर्नल / January 18, 2018 /0Comments
टोकियो । जापानमा भएको सडक दुर्घटनामा एकजना नेपालीको मृत्यु भएको छ । घटनामा अर्का एक नेपाली पनि गम्भीर घाइते भएका छन् । घटनामा बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका–६ का ३० वर्षीय किरण सापकोटाको मृत्यु भएको छ भने उनीसँगै रहेका गम्भीर घाइतेको...
काठमाडौँ । नेपाली सेनाले भद्रकालीस्थित मुख्यालयभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास नै नगरी ठूला भवनहरू बनाइरहेको छ । नक्सापास गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत सेना सम्पर्कमा नआएको महानगरको आरोप छ । सेनाको मुख्यालयभित्र ठूला–ठूला भवन, स्टेडियम र पुस्तकालय बनाइएको छ । त्यस्तै ट्रमा सेन्टरसँगैको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । बुधवार रातिदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजित मूल्यअनुसार पेट्रोलमा रु एक, डिजल र मट्टितेलमा रु दुई मूल्य बढ्ने...
By नेपाल जर्नल / December 24, 2017 /0Comments
काठमाडौं । मेची सिमानको कथामा आधारित रविन्द्र कार्कीको उपन्यास ‘बोर्डर’ सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति वैरागी काइँला, कवि विप्लव प्रतीक, पत्रकार फणीन्द्र संगम, डोलेन्द्र थापा लगायतले पुस्तकको विमोचन गरे । पुस्तकमाथि धारणा राख्दै...
By नेपाल जर्नल / January 17, 2018 /0Comments
काठमाडाैं । बैंकहरूले विभिन्न पदहरूमा अाज दरबन्दी अाव्हान गरेका छन् । ति मध्ये अाज द हिमालयन टाइम्स् मा प्रकाशित ती वटा बैंकहरूकाे लागि अाव्हान गरिएकाे विज्ञापन बैंकहरूमा अाफ्नाे भविष्य खाेज्नेहरूका लागि प्रकाशित गरेका छाैं ।
By Sabina Bajgain / January 17, 2018 /0Comments
विश्वको सबैभन्दा चिसो मानिएको गाउँको हालको तापक्रम सबैभन्दा कम तापक्रमको नजिक पुगेको छ । यो गाउँलाई त्यसैपनि संसारको सबैभन्दा चिसो गाउँ भनिँदैन । किनकि हालको तापक्रम कति छ र मौसम कति चिसो छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि,...
By Nabin Dhungana / January 17, 2018 /0Comments
सुरुङ्गा, झापा, ३ माघ । श्रीमतीको हत्यापछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बाह्रदशी गाउँपालिका–३ का ३३ वर्षीय कमलसिंह राजवंशी रहेका छन् । राजवंशी गत असोज ६ गते श्रीमती गंगा राजवंशीको घाँटी थिचेर हत्या गरेर...
काठमाडाैं । आयको तुलनामा व्यय धेरै भएपछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र लगातार दोस्रो महिना पनि घाटामा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले नकारात्मक बनेको हो । व्यापार घाटा उच्च रूपमा...
रत्ननगर, चितवन, ३ माघ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका बेला चितवनमा रु नौ लाख ९४ हजार ५४२ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन् । उनले पार्टीका सचिवालय सदस्य सूर्य सुवेदी ‘पथिक’मार्फत...
अान्दाेलनरत नर्सहरूसंग वार्ताका लागि उच्चस्तरीय सरकारी टाेली गठन
माघ ३, काठमाडाैँ । चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनरत नर्सहरुसँग वार्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।बुधबार मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो । समितिमा डा. गुणराज लोहनी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र...
Be the first to comment on "‘माई लभ’ हेर्नेलाई जापान जाने सुवर्ण अवसर"